Casriyeynta teknooloojiyada ee Geo-engineering - Juun 2019 - Geofumadas
Juunyo, 2019 GPS / Qalabka, tabo cusub, topografia
Kadaster iyo KU Leuven waxay ka wada shaqeyn doonaan horumarinta NSDI ee Saint Lucia
Xitaa ka dib dadaal badan, qaybta dowladeed, isticmaalka ballaaran ee macluumaadka geospatial ee maamul-maalmeedka, siyaasadaha dadweynaha iyo geeddi-socodka go'aan qaadashada ayaa xaddidan. Dadaalka lagu caawinayo horumarinta Mashruuca Qaran ee Macluumaadka Qaranka (INDE) ee Saint Lucia, Wasaaradda Qorshaha Jirka (DPP) ee Dawladda Saint Lucia ayaa dejisay mashruuc.
Iyadoo qayb ka ah mashruucan, Kadaster iyo KU Leuven (Jaamacadda Beljka) ayaa gacan ka geysan doonta horumarinta NSDI waarta ee Saint Lucia. Mashruucu wuxuu maalgelin ka helayaa Ururka Horumarinta Caalamiga ah iyo Sanduuqa Hirgelinta Cimilada. Waa qayb ka mid ah barnaamijka dhimista musiibada ee xukuumadda. Sida tallaabo loo qaaday xoojinta NSDI ee St. Lucia, Kadaster iyo KU Leuven waxay sameeyeen qiimeyn diyaarinta NSDI bishii Janaayo.
Iyadoo qayb ka ah qiimaynta, xubnaha shaqaalaha muhiimka ah ee DF iyo daneeyayaasha kale ee St. Lucia in qiimeyn qaybaha kala duwan ee NSDI ku saabsan xogta furan, simayo, metadata, geoportal, sharciga, hoggaaminta, khayraadka aadanaha, helitaanka, maaliyadda la codsaday , iyo kuwo kale. Qiimaynta la siiyaa macluumaad ku saabsan sida wanaagsan diyaar u xiisaynayso in aad isticmaasho NSDI ee geedi socodka shaqo-maalmeedka.
Ujeedada mashruucan waa in la falanqeeyo sababaha hoosta u ah isticmaalka iyo aqbalida xarumaha iyo xogta hadda jira. Marka baaritaan lagu sameeyo xaaladaha sharciga, maaliyadda, hay'adaha iyo farsamada ee INDE ee Saint Lucia, kooxda ayaa bixin doonta talooyin hagaajin ah. Bilaha soo socda, kooxda mashruuca ayaa dib u eegi doona xaaladda hadda jirta, waxay bixiyaan talooyin iyo horumarinta istaraatiijiyadda isbedelka.
Baadhaha laser-ka ee cusub ee Hexagon-ga oo sameeya 3D wax aan macquul ahayn ujeedo la'aan
The Leica Absolute Tracker ATS600, qeybinta sirdoonka saarta lixgeesle waa wax soo saarka cusub oo si sax ah ay helaan karaa dhibic in meel bannaan oo usii 3D habka ah in aan u baahnayn iftiinta ah meesha ugu cabbir. Iyada oo ku saleysan technology ee Wave-Form Digitizer dambeeyay qalabka qaar ka mid ah oo sahan-dhamaadka sare, ATS600 la Distancer Scan ku Absolute ugu horeysay ka shaqeeya, mid ka mid ah siyaalaha of mabda'a this farsamo in ay helaan karaa dhibic microns 300 ka 60 gudahood mitir Iyadoo lagu qiyaasayo qodobbo taxane ah oo ka mid ah aaladda isticmaalaha, ATS600 waxay si dhaqso ah u soo saari kartaa shabakad qeexaysa dusha cabbirka bartilmaameedka. cufnaanta ee dhibcood Roobka sidoo kale waa customizable by user, taas oo ku siinaysaa shaqaale gacanta ugu dhammaystiran ee dheelitirka u dhexeeya xawaaraha geedi socodka iyo heerka faahfaahin in quudin doonaa software METROLOGY.
Iyadoo Tracker Leica Absolute ku ATS600, walxaha hore loo baahan yahay maalgashi weyn oo waqti in la digital ah, ama ay ka socdeen waxaa macquul ah inuu qabo cabbirka wax ku ool ah keeni kartaa in dunida 3D falanqaynta by hal shaqaale ah oo ka fog. Iyadoo aduunka ugu horreeya ee "laser scan scan" raadiyaha, koontaroolidda tayada ayaa loo sii ballaarin karaa meelaha kale ee wax soo saarka cusub, oo ay sababtay isbadel asaasi ah sida habka 3D loo sameeyo.
ATS600 ayaa sidoo kale waxay bixisaa muuqaalada waxyaabaha Absolute Tracker yaqaan, oo ay ku jiraan qiyaaso iftiinta fogaan ah ilaa 80 mitir, oo leh awood guud ee PowerLock. isku dhafan ee lagu qiyaaso iftiinta iyo awoodaha iskaanka toos samatabbixiyaa qaab cajiib ah hawlaha cabbirka on qiyaasta weyn, iyadoo iskaanka si deg deg ah ku tilmaami sagxadaha, iyo akhrinta gaarka ah ee alignments iftiinta iyo sifooyinka qeexaya waxa lagu ogaaday.
MICROSOFT HOLOLENS 2: Muuqaal cusub oo loogu talagalay COMPUTING
Mareegta Microsoft Mobile World Congress "Matterhorn" oo ah wargeys ka soo baxa Barcelona, ​​Spain, Axad, Febraayo 24, 2019.
Xaqiiqada isku dhafan ee HoloLens 2 wuxuu isku daraa qalab leh codsiyo iyo xalal dadka ka caawiya barashada, isgaarsiinta iyo iskaashiga si waxtar leh. Waa dardargelinta horumarka Microsoft ee naqshadeynta qalabka, sirta farsamada (AI) iyo horumarinta. Illaa iyo hadda, HoloLens 2 waxay bixisaa khibrada dhabta ah ee ugu qalanta iyo isku dhafka ah ee suurtogalka ah ee suurtogalka ah oo la heli karo, iyadoo xal la siinayo shirkadaha hormoodka ah ee warshadaha ka faa'iideysta isla markiiba.
Dhexdhexaadiye: Iyadoo HoloLens 2 waxaad arki kartaa dhowr hologram oo mar ah, iyada oo loo marayo kororka cajiibka ah ee aragga aragga. Qoraalka iyo faahfaahinta badanaa ku wareersan sawirada 3D, ayaa si sahlan loo akhrin karaa oo loo roon yahay oo lagu xallin karo xalka oo hadda hogaaminaya warshadaha.
Ergonomik: HoloLens 2 waa mid raaxo leh, wuxuu leeyahay nidaam isku dheelitir ah oo loogu talagalay in loo isticmaalo waqti dheer. Waad muraayada ku haysan kartaa sababtoo ah kuleejku wuxuu ku dheggan yahay iyaga. Xilliga isbedelka shaqooyinka, kaliya sawir qaadaha ayaa kor loo qaadaa si uu uga tago xaqiiqda isku dhafan.
Dareen leh: taabashada, qabashada iyo guuritaanka hologram waa suurtogal ah qaab aad u dabiiciga ah, maxaa yeelay waxay ka jawaabaan si aad u la mid ah walxaha dhabta ah. Waa suurtogal in la galo HoloLens 2 isla markiiba oo si ammaan ah u isticmaalida indhaha oo kaliya Windows Hello. Amarrada codka waxay ku shaqeeyaan xitaa bay'adaha warshadaha ee qayaxan, iyada oo ay ugu wacan tahay isdhexgalka microfoonka caqliga leh iyo farsamaynta hadalka ee luqadda dabiiciga ah.
Haddii aan xiriir la lahayn: Kulanka HoloLens 2 waa kumbiyuutar madaxbannaan oo leh xiriirka WI-Fi, taas oo micnaheedu yahay inaad haysato wax kasta oo aad u baahan tahay markaad shaqeyso.
SYSTEMS iyo HOLOLENS 2
Bentley Systems waxay ku biireen Microsoft si ay u bilaabaan HoloLens 2 Golaha Caalamiga ah ee Mobile-ka Barcelona. Sida wakiilka warshadaha lammaane Architecture, Engineering iyo Dhismaha (AEC), isbahaysiga duurka ee dhabta ah isku qasan oo leh Microsoft ayaa permiteido Bentley Systems muujiyo sida Janumet SYNCHRO waa codsi immersive arkaysid mataano digital 4D for HoloLens 2, saamaxaya kuwa isticmaala inay dhexgalaan oo ay iskaashanayaan digital gacanta lagu daydo dhismaha kula gacanta ku bannaan ee jirka, isticmaalka baaqa jirka dareen leh si ay u qorsheeyaan view iyo kulmaan horumarintooda ee dhismaha.
Digital xogta mashaariicda mataano ah waxaa lagu soo bandhigaa la HoloLens 2 marayo deegaanka xogta ku xiran software Bentley, ku shaqeeya by Microsoft Azure ah. Iyada oo dhab isku qasan, maamulayaasha dhismaha, mashruuca barnaamijyo, ka shaqeeya, milkiilayaasha, iyo kuwo kale oo xiiseynaya in mashruuca ka heli kartaa macluumaad shaqo iyada oo muuqaalaynta immersive, sida horumarka dhismaha, khataraha ka iman kara goobta iyo shuruudaha ammaanka. Intaa waxaa dheer, dadka isticmaala ayaa la falgala model ka wada iyo la kulmaan 4D ah iskaashi u diidan in meel iyo waqti, ka duwan dhexgalka dhaqanka la a screen 2D 3D halkaas oo shay waxaa lagu soo bandhigaa.
RAADIISKA ISKU HELISTA HOLOLENS
Trimble Connect waxay xoojisaa awoodda HoloLens 2 si loo hagaajiyo wax soo saarka goobta. Trimble Connect for tectología HoloLens 2 isticmaalaa xaqiiqada isku dhafan in la keeno waxyaabaha ku 3D shaashad dunida dhabta ah, bixinta habka daneeyaha fiicnaaday: dib u eegis, xiriirinta iyo wada shaqaynta iyo maamulka mashruuca ee 3D.
Intaa waxa dheer, Trimble Connect, waxay bixisaa sax ah xogta xogta ee goobta shaqada, taas oo u oggolaanaysa shaqaalaha in ay dib-u-eegaan tusaalooyinkooda oo ay sare u qaadaan jawiga jireed. Iyada oo ay la socdaan isgaarsiinta laba dhinac ah, daruurta Trimble Connect, dadka isticmaala waxay heli karaan xogta ugu dambeysa ee ku taal goobta.
A New ROBOTIC SCANNER SOLUTION ah oo loogu talagalay dhismaha VERTICAL OF TOPCON
Iyadoo ujeedadu tahay in la siiyo qalab xoogan oo loogu talagalay naqshad hal-shaqeeye oo lagu sawirayo hal dhisme, Kooxda Topcon Positioning Group, waxay soo bandhigaysaa jiilka cusub ee saldhigyada guud ee robot-yada oo loogu talagalay baaritaanka: GTL-1000.
Waa scan tarjameed oo isku dhafan, oo lagu dhejiyay saldhigga oo dhan kaas oo ka kooban qaybo dhab ah oo la taaban karo. Marka laysku daro ClearEdge3D Verity, qalabku wuxuu bixiyaa heer cusub oo ka mid ah shaqooyinka, si loo xaqiijiyo dhismaha oo u oggolaanaya in si dhakhso ah loo baadho.
Xaladan robotikada ah waxaa loogu talagalay in ay ka faa'iidaysto raadinta iyo saxitaanka prism-ka, kaas oo u ogolaanaya dadka hawlwadeenada inay dejiyaan dhibcooyin leh kalsooni buuxda ee jawi dhismo oo adag. Waxay u ogolaaneysaa dadka ka shaqeeya in ay bilaabaan baaritaanka marka la taabto badhanka.
Sida laga soo xigtay Ray Kerwin, Agaasimaha Qorshaha Caalamiga ah, oo leh Nidaamyada Meelaha Lagu Sameeyo, waxay ka shaqeyn karaan waxqabadka 360 dhamaadka daqiiqadaha.
"Qabsashada aan xuduud lahayn ee GTL-1000 iyo run abuuraa xirmo buuxda in u san yahay dhismaha xaqiijinta isticmaalaya farsamooyin Qaabaynta 3D" ayuu yiri Nick Salmons, sahmiyaha maamulaha Laser Scanning Balfour Beatty, "The xal cusub iskaanka Nidaamka robotka ee Topcon wuxuu kor u qaadi doonaa waxsoosaarka goob-joogga iyadoo la dardar-galinayo geedi-socodka dhismaha ama aqoonsiga caqabadaha naqshadeynta kartida leh ee leh wax-qabad ka badan hababka hore. Qalabkan cusub wuxuu si weyn uga faa'iideysan doonaa bay'ada warshadaha, yaraynta kharashyada iyo muddada barnaamijyada, labadaba macaamiisha iyo qandaraaslayaasha. "
GTL-1000 ayaa sidoo kale ku jira barnaamijka MAGNET® ee barnaamijka, oo loogu talagalay inay bixiso isku-xirnaanta goobaha-goob-joogga ah waqtiga dhabta ah, iyo TSshield® ee ilaalinta maal-galinta iyo dayactirka.
XUSUUSOOYINKA KALA DUWAN QAABKU KA QAYB QAADASHADA CODSIGA COLORADO STATE UNIVERSITY
Trimbre dhawaan la Department of Construction Management ka Colorado State University (CSU) heshiis deeq ah oo lagu magacaabo "Technologies by Trimble," taas oo u oggolaan doona Jaamacadda, suurtagalnimada of kordhin ay hoggaanka tababarka iyo cilmi design dhismayaasha 3D, maareynta dhismaha, wax soosaarka digital-ka, kaabayaasha bulshada, iyo kuwa kale.
Maaddaama xalka laysku daro hardware iyo software in manhajka, laboratories of the Department of Construction Management ka mid ah waxyaabaha sida iskaanka laser Trimble, qabashada iyo la xidhiidha nidaamka boos beerta si dhakhso ah, unugyada goboleedka, hababka muuqaalka guud ee dhulka iyo qaateyaasha nidaamka dayax gacmeedka caalamiga ah (GNSS).
Barnaamijka lagu deeqay waxaa ku jira sawirada Realworks, Xarunta Ganacsiga Trimble, Vico Office Suite, Dhismayaasha Tekla, Sefaira Architecture iyo SketchUp Pro, oo ay weheliyaan software gaar ah MEP. Trimble ayaa sidoo kale qorsheynaya in ay ku deeqaan qalabka waxsoosaarku u baahan yahay, oo ay ku jiraan Field Link iyo Qalabka Nidaaminta degdega ah ee laser-ka, UAS, hababka shaxanka iyo GNSS.
Jon Elliott, Agaasime Ku-xigeenka Waaxda iyo Isuduwaha Barnaamijka shahaadada hoose oo ka mid ah Department of Construction Management - CSU, la wadaago, "Iyada oo gogo 'badan oo ka mid ah codsiyada software iyo hardware Trimble, ardayda helaan gaadhista weyn teknoolajiyada jarida-ku laayeen sahan, qiyaasidda iyo dhismaha ku salaysan design dalwaddii (VDC), logistics site, qaabaynta 3D, falanqaynta ee tamarta ee dhismayaasha, iskaanka laser, photogrammetry oo dheeraad ah. Marka laga soo tago codsiyada, shaqaalaha khaaska ah ee Trimble waxay siin doonaan fursado waxbarasho oo aan caadi ahayn iyada oo loo marayo bandhigyo iyo tababar ku saabsan isticmaalka software. Iyada oo kaashanaysa this xiiso leh, Trimble sameynayo darsaday muhiim ah si ardayda si ay ula falgalaan dhismaha la teknoolajiyada sare oo firfircoon diyaariyo "
Roz Buick, Madaxweyne kuxigeenka Trimble ayaa yiri: "La shaqeynta Waaxda Maamulka Milateriga ee CSU ayaa ah mid xiiso leh.
Miisaaniyadda Trimble ayaa aad ugu haboon ardayda jaamacadda. Waxay farxad u tahay in ay aragto jiilka soo socda ee dhismaha, injineernimada, dhismayaasha iyo dhismayaasha xirfadlayaasha dhismaha, waxay la kulmaan xajmiga iyo qoto dheer ee xalliyadayada oo qayb ka ah wareegga nolosha dhismaha. Waxaan sidoo kale rajeyneynaa in aan taageerno oo aan ka barano xirfadlayaasha cusub marka ay waayo aragnimadooda iyo adeegsigayaga xal u helayaan dunida dhabta ah iyada oo loo marayo qorshayaashooda waxbarasho. "
Post Previous«Previous Waxaan soo saarey Geo-Engineering - Wargeyska
Post Next News of Geo-engineering - AutoDesk, Bentley iyo EsriNext »